တူရကီနိုင်ငံတွင် သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပစ္စည်း ၄၁၅ ခု မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုအား ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီး - Xinhua News Agency
တူရကီနိုင်ငံတွင် သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပစ္စည်း ၄၁၅ ခု မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုအား ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီး
Shenzhou-12 ခရီးစဉ်၏ တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများအတွက် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်း ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားပြုလုပ်
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ပူတင် က အနောက်နိုင်ငံများ၏ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ဆက်ဆံရေးအခင်းအကျင်းထဲ ရုရှားနိုင်ငံ ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား
ပြင်သစ်နိုင်ငံ က “ညမထွက်ရအမိန့်” အား သတ်မှတ်ချိန်ထက်စော၍ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၅,၁၅၀ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၇၃ဦး ထပ်မံသေဆုံး
ဘော့စ်ဝါနာနိုင်ငံ၌ အလေးချိန် ၁,၀၉၈ ဒသမ ၃၀ ကရက်ရှိသော စိန်တုံးကို တူးဖော်တွေ့ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးပြန်လည် နလံထူရန် ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း ကန့်သတ်ချက်များအပြည့်အဝ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်နေ
ရီရဲမက်ဒရစ်ဘောလုံးအသင်း က အသင်းခေါင်းဆောင် ဆာဂျီယိုရားမို့စ်အား အသင်းမှထွက်ခွာခွင့်ပြု
ဟောင်ကောင်တွင် ကိုဗစ်ကာလအတွင်း နဂါးလှေလှော်ပြိုင်ပွဲကို ကုန်းပေါ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့
တရုတ် ဗုံးရှင်းလင်းရေးရဲအရာရှိတစ်ဦး၏ ရှင်သန်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းကြား လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုများ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် တောင်အာရှ၏ အကြီးဆုံးကျောက်ကပ်ဆေးရုံကြီးသီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ဖွင့်‌လှစ်
မျက်စိပသာဒ ဖြစ်ဖွယ်ရေအောက် အက
အစ္စတန်ဘူလ်၊ ဇွန်၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တူရကီနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တွင် တူရကီရဲတပ်ဖွဲ့သည် သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပစ္စည်း ၄၁၅ ခုအား မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သံသယရှိသူခြောက် ဦး ကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားကြောင်း Ihlas သတင်းအေဂျင်စီက တနင်္လာနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အစ္စတန်ဘူလ် မှောင်ခိုတားဆီးရေးအဖွဲ့ သည် သံသယရှိသည့်မှောင်ခိုသမားများအားဖမ်းဆီးရန် မြို့အတွင်းရှိ နေရာ ၄ခုတွင် ရှာဖွေရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မှောင်ခိုသမားများသည် ပြတိုက်များတွင်ပြသထားသည့် အမွေအနှစ်ပစ္စည်းများအားခိုးယူကာ ရောင်းချရန်ကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသိမ်းဆည်းရမိသည့်အမွေအနှစ်ပစ္စည်းများကို အစ္စတန်ဘူလ်မြို့အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာပြတိုက်အသီးသီးသို့ ပြန်လည်အပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
415 smuggled historical artifacts seized in Turkey’s Istanbul
ISTANBUL, June7(Xinhua) — Turkish police seized 415 smuggled historical artifacts in Turkey’s biggest city, Istanbul, and detained six suspects, Ihlas news agency reported Monday.
Istanbul’s anti-smuggling units recently receivedatip-off that many historical artifacts were illegally collected and would be sold to various museums, according to Ihlas.
Following the technical and physical follow-up and intelligence studies, the units have launched operations in four addresses across the city and detained the suspected smugglers, it said.
The seized artifacts included pieces of historical coins from the Ottoman, Seljuk, and Byzantine periods, some bronze figures in various sizes, statuettes describing ancient sports activities such as wrestling and discus throwing.
Additionally, an eagle statue embroidered onabull’s head symbolizing Zeus, some bronze kitchen utensils, and several spearheads has been found during the searches conducted at the addresses.
Ihlas noted that the seized artifacts will be delivered to the related museums in Istanbul. Enditem
တရုတ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေ သန်း ၂၀၀ ထိုးနှံပေးရန် အချိန် ၂၅ ရက်သာ ကြာမြင့်ခဲ့
အာဖရိကတိုက်တွင် ဆင်များနှင့် လူများ မည်သို့ သဟဇာတ ရှိစွာ နေထိုင်ကြသနည်း